ငြိဏ်းဝေ | လမ်းအိုလေး
Tag Archives: ငြိဏ်းဝေ
နာမည်ကျော်ကြားမှု သတင်းကြီးမှု ခေါင်းဆောင် ဘာမှမလိုချင် လိုချင်စိတ်မရှိ ဒါဟာသေချာမှု အခုဖြစ်မှုဖြစ်တယ် (ငြိဏ်းဝေ)
ငါသေမှာပဲ။တစ်ညလုံးလည်း အိပ်မရဘူး ၃၄၅ည အိပ်ဆေးသောက်ဖို့ စိတ်မရှိဘူး လမ်းလျှောက်ဖို့ စိတ်မရှိဘူး ရည်ရွယ်ချက်မဲ့ ကျန်းမာနေတာ ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိလို့လဲ ဝက်တစ်ကောင်လို ငါလား ငွေကို နှစ်၅၀လုံးလုံးငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး လိုအပ်နေခဲ့တဲ့ အခြေအနေကို ဟာသအလွမ်း ဒါမှမဟုတ် အလွမ်းဟာသ ဒါမှမဟုတ် စိမ့်ထွက်မျက်ရည် ဒါမှမဟုတ် ပုလဲမီးတောက် ဒါမှမဟုတ် ကြေကွဲတိမ်တိုက်ဖြူဖြူလို့ အဓိပ္ပာယ်ဗဟုပြုနိုင်တယ် Continue reading →
Categories: Conceptual, Kabyarz | Tags: အနမတဂ္ဂ, ငြိဏ်းဝေ, conceptual, Kabyarz, lanolay, Nyein Wai | Permalink.
by lanolay	Leaveacomment	>
(ဂဃနဏ – ငြိဏ်းဝေ။ နှစ်ကာလများ – အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၀။)
Categories: Conceptual, Kabyarz | Tags: ကွန်ဆက်ကဗျာ, ဂဃနဏ, ငြိဏ်းဝေ, conceptual, Kabyarz, lanolay, Nyein Wai | Permalink.
by lanolay	1 Comment	>
မည်သို့လုပ်လိုက်သည်မသိ သံသရာ (ငြိဏ်းဝေ)
ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာ မြက်ပင်တွေစိမ်းနေတုန်းပဲ။ မနေ့ညက မိုးမရွာဘူး။ နွေလယ်ခေါင် နိုးတုန်းအိပ်မက်။ (ငြိဏ်းဝေ)
စစ်တုရင် အနုပညာမှာ ခင်ဗျားခဏလောက် မျောဝင်ကြည့်ရင် အနုပညာရဲ့နိဂုံးကို တွေ့နိုင်တယ် (ငြိဏ်းဝေ)
ဥာဏ်ပညာအတွက် ကဗျာဖတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ စားဝတ်နေရေး ဟားတိုက်နိုင်ရင်။ ထမင်းအသက် ကဗျာလဆန်းတစ်ရက်။ (ငြိဏ်းဝေ)
တစ်ချက်တည်းကျင်းဝင်၊ ညီလေးလေးနက်စွာ အတွင်းအပြင် (ငြိဏ်းဝေ)